“အတွေးစလေးတွေ”: ဘလော့ဂ်ဒေး - ၃ ( တက်ဂ်ပို့စ်အဆုံး ) . . .
ဦးဟန်ကြည် အမြဲသွားလေ့ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုက ဒေါ်ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ရဲ့ဘလော့ပါ။ facebook ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပေမယ့် တရင်းတနှီးစကားမပြောဖြစ်ပါ။ သူ့ဓာတ်ပုံထဲက ရှုတင်းတင်းဒီဇိုင်းကို လန့်တာကြောင့်လည်း တစ်ကြောင်းပါပါတယ်။ သူရေးတဲ့ပို့်စ်တွေထဲက “နေပြည်တော်ဆဖာရီဥယျာဉ်သို့” ကို အိမ်ရှင်မနဲ့အတူဖတ်ရင်း စိတ်ပါသွားကြတာကြောင့် ဒီနှစ်နွေရာသီက နေပြည်တော်ကို တစ်ပတ်ကြာအောင် အပန်းဖြေခရီးသွားဖြစ်ပြီး ဆဖာရီဥယျာဉ်အစစ်နဲ့ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တော့မှပဲ ပိုလို့အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့ပါရဲ့။ ဟင်းချက်ကောင်းလှတဲ့ ဒေါ်ချောနဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ဖို့ မကြာမကြာလည်း ဆုတောင်းမိပါသေးတယ်။ အိမ်နားသာနီးရင် သူ့အိမ်က ဟင်းနံ့ရတိုင်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ဧည့်သည်သွားလုပ်လို့ ရမယ်လို့ လိုရာဆွဲတွေးမိလို့ပါ။ ဒေါ်ချောရဲ့ ဘာဘာညာညာတွေက ရိုက်ထုတ်တော့လည်း အနည်းဆုံးတော့ အပြေးကျင့်ပြီးသားဖြစ်မယ် မဟုတ်ပါလား။
ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းမှာ စံမြန်းတော်မူတဲ့ အဖြူရောင်နတ်သမီး ကိုလည်း အကြောင်းသုံးပါး ရွေးမှာမဟုတ်တဲ့ သူ့မျက်စောင်းကို ကြောက်ရတာကြောင့် ဒီပို့စ်မှာ ချန်ထားလို့မဖြစ်ပါ။ မျက်စောင်းစာမိရင် ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ချောကလက်ရောင် အသားအရည်ကနေ သပိတ်ရောင်ပေါက်သွားမှာ စိုးရိမ်ရတယ် မဟုတ်ပါလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးညကျော်လောက်ကပဲ “ဦးဟန်ကြည်ကြီး အသားတွေ ပိုမည်းပါစေတော် ”လို့ ဂျီတော့မှာ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တာကို ခံရပြီးကတည်းက သူ့ကိုတော့ လန့်ရပါတယ်။ နတ်သမီးရဲ့ဘလော့ကိုတော့ ဆိုက်ပရပ်စ်ကျွန်းရဲ့ အလှတွေ ဆီပရီယိုတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို သွားဖတ်ရင်းနဲ့ အခုထိ ဖတ်ဖြစ်နေပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနတ်သမီးက အခုတလော အလုပ်များတာရယ်၊ ဖျားတာရယ် အကြောင်းပြပြီး စာရေးကျဲနေပါတော့တယ်။ ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းတွေရဲ့မွေးနေ့တွေကို ကျကျနန လုပ်ပေးလေ့ရှိတာလည်း အနှီနတ်သမီးပါ။ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ဧပြီလမှာရောက်မယ့် သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကို နတ်သမီးကို ကန်ထရိုက်ပေးပြီး Remy Martin နဲ့ပဲကျင်းပခိုင်းရမလား၊ Hennessey နဲ့ပဲ ကျင်းပခိုင်းရမလား စဉ်းစားနေမိပါရဲ့။
( နတ်သမီးက သူ့နံမည်ကို အခါတစ်ရာပြည့်အောင် ထည့်ရမယ်လို့ ရာဇသံပေးပါတယ်။ နတ်သမီးနံမည်အပေါ်မှာ ထပ်ညွှန်း ၁၀၀၀ တင်ပြီး ဖတ်ပေးတော်မူကြပါ )
ဒီလပိုင်းမှာ facebook မှာ မကြာမကြာဆုံဖြစ်တာကတော့ ကိုဇော် ပါ။ သူ့ဘလော့မှာ ထိပ်စည်းတင်ထားတဲ့ “ရေးတဲ့စာနဲ့ စာရေးတဲ့သူကို မရောထွေးစေချင်ပါ ”ဆိုတဲ့စာသားကို ဦးဟန်ကြည် အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀က အချစ်ကဗျာတွေ အရေးများတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကို သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်ကောင်မလေးကိုများ ရည်ရွယ်ပြီးရေးသလဲဆိုတာ မယုံသင်္ကာတဲ့အမေးတွေနဲ့ မကြာမကြာအမေးခံခဲ့ရတာကြောင့် ရေလဲနဲ့သုံးခဲ့ရတဲ့ စကားလုံးဖြစ်နေလို့ပါ။ သူက facebook မှာ ဘလော့ဂ်ဒေးအကြောင်းရေးဖို့ ဘလော့ဂါတွေကို တက်ဂ်ထားပါသေးတယ်။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ကိုဇော်က ခင်စရာကောင်းတယ်လို့ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ မြင်ပါတယ်။ သူလုပ်ပေးထားတဲ့ “ ဘလော့ဂါများရဲ့ ပို့စ်များ ” ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးက ဘလော့ဂ်လောကသားတွေအတွက် အင်မတန် အကျိုးများပါရဲ့။ အဲဒီဆိုဒ်ကို သွားကြည့်ပြီး ဘာတွေအသစ်တက်သလဲဆိုတာ အသာလေးဖတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ သူ့ကိုတော့် ဦးဟန်ကြည်က ဘလော့ရွာရဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် လို့ နံမည်ပေးချင်ပါရဲ့။ အနှီကိုဇော့်မှာက ဂျီတော့ခ်မိတ်ဆွေပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ရှိတာကတော့ စံချိန်လို့များဆိုရမလားမသိပါ။ ဂျီတော့ခ်မိတ်ဆွေ ၂၀ ပြည့်အောင်တောင် လောက်လောက်လားလား မရှိရှာတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကတော့ ကိုဇော်ရဲ့ မိတ္တဗလဋီကာ ကျေပုံကို သြချယူရပါရဲ့။
ကိုမြစ် ( မြစ်ကျိုးအင်း) ကိုတော့ “ကမ္ဘာမြေမှာ ဖျော်ဖြေမှုတွေကုန်သွားရင်တောင် ကျန်နေစေချင်တာ ရသစာပေပါ”ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့တွဲပြီး မှတ်မိနေတဲ့ ဘလော့ဂါပါ။ သူလုပ်နေတဲ့ အွန်လိုင်းရွှေဝထ္ထုဆုကို ဦးဟန်ကြည် အင်မတန်မှ အားရသလို နိုင်သလောက်လုပ်နေတဲ့ သူ့ကိုလည်း အင်မတန်လေးစားပါတယ်။ ရသစာပေအတွက် သူလိုလူတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘကြီးမြစ်လို့ နံမည်တပ်ပြီးရေးလေ့ရှိတဲ့ ကိုမြစ်က ပင်ကိုရေးအရေးကောင်းသူဖြစ်လို့ စာပေနယ်မှာ အောင်မြင်စေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက International Look မဂ္ဂဇင်းမှာ ကဏ္ဍတစ်ခုကို တာဝန်ယူပြီး အွန်လိုင်းဘလော့တွေပေါ်က ဘလော့ဂါတွေကို offline မှာ ချပြနေပါတယ်။ “အွန်လိုင်းမှာလည်း ပညာရှင်တွေရှိကြောင်း ကျွန်တော်ချပြချင်တာအစ်ကို”လို့ တစ်ဖွဖွပြောလေ့ရှိတဲ့ ကိုမြစ်ရဲ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။
အဖြူလေး ရဲ့ ဘလော့ကိုတော့ မာန်(တောင်လုံးပြန်)ရဲ့ ၀ထ္ထုကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်သွားဖတ်မိရင်းက ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း ရောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဖြူလေးက ဘာသာရေးကိုလည်း လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်ယုံကြည်သူဖြစ်တာကြောင့် သံသရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဒီဘက်ကာလတွေမှာ မကြာမကြာတင်နေပါတယ်။
ဘာသာရေးအသိရှိပေမယ့် မေ့မေ့လျော့လျော့ ဖြစ်နေလေ့ရှိတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကို တရားကပ်အောင် သတိပေးနိုင်တဲ့ အတွေးအခေါ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အဖြူလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရမယ့် ဘလော့ဂါစာရင်းကနေ ချန်ထားလို့ မရစကောင်းပြန်ပါ။
ဘလော့ရွာကို ရောက်တာ မကြာသေးပေမယ့် ရေးအား၊ ဖတ်အား အင်မတန်ကောင်းသူကတော့ အန်တီတင့် ပါ။
ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ရသမျှကွန်နက်ရှင်ကလေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်အသုံးချပြီး ပို့စ်တွေတင်နေတဲ့ ဘလော့ဂါအန်တီတင့်ကိုလည်း ဦးဟန်ကြည်လေးစားပါတယ်။ အန်တီတင့်က သူ့ဖေဖေအကြောင်း၊ သူလုပ်စားဖြစ်တဲ့မုန့်တွေအကြောင်း၊ ဘုရားသမိုင်းတွေအကြောင်းကို စီကာပတ်ကုံးရေးတတ်သူပါ။ ကိုယ်တိုင်က အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဦးဟန်ကြည်တို့ထက် အများကြီးစီနီယာကျတဲ့အန်တီတင့်ရဲ့ ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်လေးတွေကို ဖတ်ရတာ အမေလူထုဒေါ်အမာရဲ့ “ အမေ့ရှေးစကား ” ကိုတောင် ပြန်သတိရသွားစေပါရဲ့။ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ချီးကျူးမိတဲ့အပြင် ဘလော့ဂ်အလည်သွားတဲ့နေရာမှာ စံချိန်တင်ရလောက်အောင် ဘလော့ဂ်အားလုံးနီးပါးကို ရောက်ဖြစ်တဲ့ အန်တီတင့်တစ်ယောက်လည်း ဆက်ပြီးဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ။ ဦးဟန်ကြည် ရန်ကုန်ကိုအလည်လာဖြစ်ရင်လည်း အိမ်မှာဖိတ်ပြီး မုန့်လုပ်ကျွေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေ။
ဒီလပိုင်းမှာ ဦးဟန်ကြည်ဆီကို မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ရောက်လာသူကတော့ မဒိုးကန် (မဒန်ကိုး) ပါ။ သူ့ဘလော့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ကိုရင်သာပျော့ ပါ အင်တိုက်အားတိုက်ရေးနေတာတွေ့ရတာမို့ တယ်လည်းညီတဲ့စုံတွဲလို့ မုဒိတာပွားရပါတယ်။ သူ့ဘလော့ကိုတော့ ရင်းနှီးတာ သိပ်မကြာသေးတာမို့ ဦးဟန်ကြည် ဝေဖန်ချက်သိပ်မပေးနိုင်သေးပါ။ ဝေဖန်ချက်အပေးမှားရင်လည်း ကလေးကလားဆန်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ တရွတ်ဆွဲပြီး နှက်ထည့်လိုက်မှာကြောက်ရသေးတယ် မဟုတ်ပါလား။ လွန်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်သုံးလေးခုကျော်လောက်က သူတင်လိုက်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်ပို့စ်လေးတစ်ခုကတော့ဖြင့် ရင်ထဲကို ထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာမို့ သတိတရတော့ ရှိနေပါရဲ့။
ဘလော့ရွာက စုံတွဲတွေမှာ အားကျစရာ၊ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ နောက်တပ်စုံတွဲကတော့ ငွေလမင်းတို့စုံတွဲလို့ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးစာအရေးအသားကောင်းသလို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုချစ်ကြောင်း၊ သံယောဇဉ်ကြီးကြောင်း အပြန်အလှန်ရေးကြတာတွေကိုဖတ်ရင်း ဦးဟန်ကြည်တောင် အသက်တော်တော်ပြန်ငယ်လာတယ်လို့ ခံစားမိရပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချစ်ပိုလွန်းကြတဲ့ ဒီစုံတွဲကို ဦးဟန်ကြည် မကြာမကြာ ကွန်မန့်ထဲမှာ ရန်တိုက်ပေးလေ့ရှိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ယောက်က ရန်ဖြစ်တာကိုလည်း ပို့စ်ဖြစ်အောင် ရေးနိုင်သူတွေမို့ ကုန်ကြမ်းသွားပေးသလို ဖြစ်တာက များပါလိမ့်မယ်။ ကဖိုးငွေက သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အထောက်အထားလေးတွေ၊ သိစရာ၊ မှတ်စရာလေးတွေကိုလည်း ရေးတတ်သူဖြစ်တာမို့ လေးလည်းလေးစားမိပါသေးတယ်။
နောက်ထပ်ဘလော့ဂါစုံတွဲဖြစ်တဲ့ ကိုရင်နော်နဲ့ မခင်လေးငယ် တို့ရဲ့ ဘလော့ကိုလည်း ဦးဟန်ကြည် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရွာကို ရောက်စအချိန်က မကြာမကြာ စာသွားဖတ်ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ သူတို့ဘလော့လဲ ပါပါရဲ့။ ဒီဘက်ကာလတွေမှာတော့ အဲဒီဘက်ကို မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီမို့ ဒီစုံတွဲဆက်ရေးဖြစ်သလား၊ မရေးတော့ဘူးလား မသိတော့ပါ။ ဘလော့ဂါစုံတွဲတွေကို အားကျလာရင်း မဒမ်ဟန်ကြည်ကိုပါ ဘလော့ရွာထဲခေါ်ဖို့ စဉ်းစားမိတဲ့အထိ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ ဘလော့ဂါစုံတွဲဆိုတာ ဘလော့ရွာရဲ့ ကျက်သရေဆောင် တွေ မဟုတ်ပါလား။
ကွန်မန့်မပေး၊ ခြေရာမချန်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အွန်လိုင်းစသုံးဖြစ်ကတည်းက အမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ ပါ။ သူက နိုင်ငံတကာက ထူးခြားဆန်းပြားလေးတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေကောက်နုတ်ဘာသာပြန်ပြီး စုစုဆောင်းဆောင်းနဲ့တင်ပြတတ်သူမို့ သူ့ဘလော့ဂ်လေးမှာ ဦးဟန်ကြည် မမြင်ဖူးခဲ့၊ မကြားဖူးခဲ့သမျှတွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ကိုပီတာက ပုံညွှန်းတပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဟာသဓာတ်ခံအပြည့်ရှိသူမို့ သူ့ပုံညွှန်းလေးတွေကို အရသာခံပြီး ပျော်ပျော်ကြီး ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးနိုင်ငံမှာ လုပ်တဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်၊ ဆရာချစ်ဦးညိုတို့ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲကိုလည်း အဓိက ၀ါယမစိုက်ထုတ်ခဲ့သူမို့ ( သူကတော့ သူ့ကိုယ်သူ TTMY တောက်တိုမယ်ရလို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါသတဲ့ )ကိုပီတာရဲ့ စာပေသစ္စာကို လေးစားမိပါသေးတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စ်ိတ်ပျက်၊ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုပီတာရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ရောက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ အံ့သြရ၊ ရယ်ရတာနဲ့တင် စိတ်ညစ်ပြေသွားလေ့ရှိတာမို့ ကိုပီတာကို ဘလော့ရွာရဲ့ စိတ်ကုဆရာ လို့ ဦးဟန်ကြည်က ကင်ပွန်းတပ်ပေးချင်ပါရဲ့။
ကွန်မန့်ဘောက်စ်ရော၊ စီဘောက်စ်ပါ မရှိလို့ ခြေရာချန်ခွင့်မရပေမယ့် အမြဲလိုလို သွားဖတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ ခင်မမမျိုး ရဲ့ဘလော့ဂ်ပါ။ သူက ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ပညာရေးစီမံချက်တွေ၊ အယူအဆတွေကို အင်မတန်အရေးကောင်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရသထက် သုတဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ဦးစားပေးပြီး ရေးလေ့ရှိတာကြောင့် သူ့ပို့စ်တွေက Term paper ဆန်နေပေမယ့် အရေးအသားက အင်မတန် ရှင်းလင်းတာကြောင့် အလွယ်နဲ့ သဘောပေါက်စေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မအားမလပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားက ပညာရေးလောကကို သံယောဇဉ်ကြီးလှတဲ့ ခင်မမမျိုးက ပညာရေးလောကသားတွေကိုလည်း အင်မတန်သံယောဇဉ်ကြီးသူလည်း ဖြစ်ပါသေးရဲ့။ ဦးဟန်ကြည် ဖတ်ချင်လှတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းတွေရနိုင်မယ့်နေရာကိုလည်း လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ဖူးတာမို့ တိုးတက်ချင်လွန်းတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်စာရင်းထဲမှာ သူ့ကို ထိပ်ဆုံးက မထည့်လို့ ဖြစ်ကိုမဖြစ်ပါ။
ကိုငြိမ်းနိုင် ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုတော့ သတိထားမိတာ သိပ်မကြာသေးပါ။ မဒိုးကန်ရဲ့ဘလော့မှာ ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ ကလိတတ်လွန်းတာကြောင့် သတိထားမိပြီး လင့်ခ်ကနေ သူ့ဘလော့ဂ်ကို သွားလည်ဖြစ်မှ အတွေးသွက်သွက်၊ အရေးညက်ညက်နဲ့ ဖတ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခု ကောက်ရလိုက်ပါတော့တယ်။ တစ်ခုခုဆိုရင် အတွေးသန်လွန်းတဲ့ ဦးဟန်ကြည်အတွက် တွေးဖော်တွေးဖက် တစ်ယောက်ရလာသလို ခံစားရတာမို့ မဖတ်မိလိုက်တဲ့ သူ့ပို့စ်အဟောင်းတွေကိုလည်း အားရင်အားသလို သွားဖတ်နေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဦးဟန်ကြည်ဆီကို ပုံမှတ်လိုလို စာလာလာဖတ်နေတဲ့ Blackrose ကိုလည်း ချန်ထားလို့မရပြန်ပါ။ အရင်ပို့စ်မှာကတည်းက သူ့ဘလော့ဂ်အကြောင်းကို ထည့်ရေးဖို့ လာပြီးသတင်းပို့သွားတာမို့ပါ။ သူ့ဘလော့ဂ်နဲ့ ရင်းနှီးတာ သိပ်မကြာသေးတာမို့ ဝေဖန်ချက်တော့ မပေးနိုင်သေးပါ။ ဖတ်မိသမျှကတော့ သူ့ချစ်ချစ်အကြောင်းလေးတွေ စီကာပတ်ကုံးရေးထားတာပါပဲ။ ခင်စရာကောင်းတဲ့ “ပစ်ပစ်”ကလေး အစစအဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါရဲ့။
အခုလပိုင်းမှာ မိုးယံ ရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ဦးဟန်ကြည်ရောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့နံမည်ကို မြင်ဖူးကြားဖူးတာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် အရောက်အပေါက် နည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကြီးမင်း(ကိုကိုမောင်)ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းအိုလံပစ်မှာ မစားရ၊ မသောက်ရတဲ့ ပထမဆုကြီးကို ဆွတ်ခူးသွားကတည်းက စိတ်ဝင်တစားရှိမိတာကြောင့် ဒီဘက်ကာလမှာ ပို့စ်အသစ်တိုင်းလိုလို သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နတ်သမီးကတော့ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ မိုးယံ(ဗိုက်ပူ)လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ၀ိသေသ ထိုးပေးထားပါရဲ့။ မဒိုးကန်ကတော့ ပေတရာပေါ် ရေကူးတဲ့ မိုးယံလို့ အမည်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်များ အဲဒီလို ဂုဏ်ထူးတွေရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကမိုးယံနဲ့တွေ့မှပဲ မေးရတော့မှာပါ။
ဘလော့ဂါတွေထဲက လူချင်းပါဆုံဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးတာကတော့ ဘလော့ဂါမင်းသား လို့ဆိုရမယ့် မောင်မျုိုး ပါ။ သူက ဦးဟန်ကြည်ထက်ငယ်ပေမယ့် ဘလော့ရွာမှာ စီနီယာဖြစ်တာမို့ ကိုယ့်ထက် ၀ါကြီးတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ မောင်မျိုးက သူ့ဆွေမျိုးတွေအကြောင်း၊ သူ့အကြောင်းတွေကို စီကာပတ်ကုံးနဲ့ ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေးတတ်သူမို့ သူရေးတဲ့ မဲ့ဆောက် ကဗျာကတည်းက သူ့ဘလော့ဂ်ကို အဲဒီအချိန်ကစပြီး အခုထိ ဦးဟန်ကြည် ဆက်တိုက်ဖတ်ဖြစ်နေပါရဲ့။သူ့ပုံတွေကို facebook ပေါ်မှာ မြင်ဖူးတုန်းက အကောင်ကြီးကြီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းဆုံဖြစ်တော့ ဒီဘက်ခေတ် ကိုရီးယားမင်းသားများလို သေးသေးသွယ်သွယ် ဖြူဖြူလေးဖြစ်နေလို့ တအံ့တသြဖြစ်ရပါသေးတယ်။ မောင်မျိုးက သူ့ဘလော့ထဲမှာ ခပ်ရွှင်ရွှင်ရေးလေ့ရှိပေမယ့် အပြင်မှာတော့ ပြုံးရုံရယ်ရုံလောက်ပဲ ရှိပြီး စကားနည်းတဲ့ ခပ်အေးအေးလူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ ဘာမဆို ကူညီတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် ဦးဟန်ကြည် မဲ့ဆောက်ကို ဈေးဝယ်ထွက်ဖြစ်ရင် ယိုးဒယားလို စကားပြန်လုပ်ပေးဖို့ သူ့ကိုပဲ အားမနာတမ်း စစ်ကူတောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ဆီက အကူအညီရရုံသာမကဘဲ ညနေစာပါ ဇွတ်အတင်း လုပြီးကျွေးတတ်တဲ့ မောင်မျိုးပါ။ လက်ဆောင်ပေးတာလည်း အင်မတန်ဝသီပါတဲ့ ဘလော့ဂါဖြစ်တာမို့ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲကို သူဝယ်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ မသိမသာ ထိုးထည့်တတ်တာကြောင့် အိမ်ပြန်ရောက်မှ အားနာပါးနာနဲ့ သိရတတ်ပါသေးရဲ့။ မဒမ်ဟန်ကြည်ကတော့ အနှီ ဘလော့ဂါ မောင်မျိုးကို သူ့မောင်လေးတစ်ယောက်လိုပဲ ခင်ပါသတဲ့ဗျား။
( ဘလော့ဂ်ဒေး ၂ မှာ သူ့အကြောင်းမပါလို့ စိတ်ကောက်ပြီး အိပ်ပြီလို့ အော်သွားတဲ့ မောင်မျိုးရေ…နောက်ဆုံးပိတ်မှာ အိတ်နဲ့လွယ်ပြီးထားတာ မြင်ပြီမဟုတ်လား…)
ဘလော့ဂ်ရွာထဲမှာ ပရိုစာရေးဆရာတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလည်းရှိတာမို့ ဦးဟန်ကြည် စာကြမ်းပိုးအတွက် အင်မတန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) ကတော့ ဥပမာပေးတာလေးတွေ လှလှပပနဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင် တွေးတတ်သူမို့ အသစ်တက်တိုင်း သွားဖတ်ရပါတယ်။ လူငယ်တွေကို အင်မတန်တိုးတက်စေချင်လွန်းတဲ့ ဆရာဦးအောင်သင်း ကတော့ သူ့ရဲ့ပညာရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုပါ မကြာမကြာတင်လေ့ရှိတာကြောင့် ပညာရေးလောကသား ဦးဟန်ကြည်အတွက် တကယ့်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဦးဟန်ကြည် အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကတည်းက မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ အခန်းဆက်အဖြစ် တရှိုက်မက်မက် စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ UNV volunteer မေ့ဆေးဆရာဝန် စိုးမြင့်(မေ့ဆေး) ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ရပြန်တာကြောင့် ပို့စ်အတင်ကြဲပေမယ့် အလုပ်အားရင် အားသလို တင်လေ့ရှိတဲ့ ဆရာ့စာတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်သွားဖတ်ရင်း မဖြစ်လိုက်ရတဲ့ UNV ဆရာဝန်ဘ၀ကို အလွမ်းဖြေဖြစ်ပါရဲ့။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ဦးဟန်ကြည်ကလွဲလို့ လူငယ်တော်တော်များများရဲ့ အသည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်) ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုတော့ နှစ်ခေါက်လောက်ပဲ အလည်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ထ္ထုတွေထဲမှာ အများနားမလည်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ ဖောဖောသီသီညှပ်သုံးလေ့ရှိပြီး မယုံချင်စရာကောင်းလောက်အောင် သဘာဝနဲ့ကင်းကွာလှတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို စက်နဲ့လှိမ့်ထုတ်သလို ရေးနိုင်လွန်းတဲ့ လွန်းထားထားရဲ့ စာတွေကိုတော့ Savage Garden ရဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်
Truly, madly, deeply ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီး ယူထားတဲ့ “ စစ်မှန်စွာ၊ ရူးသွပ်စွာ၊ နက်ရှိုင်းစွာ ” တစ်အုပ်ထဲနဲ့တင် သံယောဇဉ်ပြတ်သွားတာမို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ပေမယ့် ယောင်လို့တောင် ထပ်မသွားဖြစ်တော့ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်တက်ရင် စာဖတ်တဲ့အလုပ်က်ိုပဲ ခုံခုံမင်မင်လုပ်တတ်လေတဲ့ ဦးဟန်ကြည်က ရသစာပေဘလော့တွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘလော့တွေ၊ သုတဆိုင်ရာဘလော့တွေကို အားလုံးနီးပါးလိုလို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ရောက်ဖြစ်သမျှဘလော့တွေမှာ လက်လှမ်းမီသလောက်ပို့စ်တွေကိုတော့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ပြီး ကျကျနန ကွန်မန့်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကွန်မန့်ဆိုတာ ဘလော့ဂါရဲ့ အားဆေးဖြစ်နေလို့ပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုကြောင့် ဘလော့ဂါမှာ ပညာဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကျေနပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်ပြီးရေးချင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ် ပေါ်လာ၊ ရလာရင် ကွန်မန့်ပေးရကျိုးနပ်တယ်လို့လဲ ယူဆပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကွန်မန့်ပေးခြင်းဟာလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ မြန်မာစာပေတိုးတက်ရေးကို ပံ့ပိုးကူညီနေတယ်လို့လည်း ဦးဟန်ကြည်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ စာကို ကျကျနနဖတ်ပြီး ထိထိမိမိ ကွန်မန့်လေးတွေပေးတတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကိုလည်း ဦးဟန်ကြည် အလွန်ချီးကျူးလေးစားပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘလော့ရွာရဲ့ ရွာစောင့်နတ် တွေပါ။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမရှိရင် ဘလော့ဂါဆိုတာလည်း ရေးအားရှိတော့မှာ မဟုတ်တာ သေချာလို့နေပါရဲ့။
ဒီဘလော့ဂ်ဒေးပို့စ်မှာ ဦးဟန်ကြည်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဘလော့တွေကိုပဲ ညွှန်းထားတယ်လို့လဲ မယူဆစေချင်ပါ။ တကယ်တော့ ဒီဘလော့ရွှာမှာ ရှိသမျှ ဘလော့ဂါအားလုံးအား ဦးဟန်ကြည်အတွက်ကတော့ စာပေညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေပါပဲ။ တစ်ချို့ဘလော့တွေကို ရုတ်တရက်စဉ်းစားလို့မရတာရယ် ဘလော့ဂ်အားလုံးကို ညွန်းနေရင် မတန်တဆ ရှည်လွန်းလှတဲ့ ပို့်စ်ကြီးဖြစ်သွားမှာရယ်တွေကြောင့် တစ်ချို့ဘလော့ဂ်တွေကိုတော့ အကျယ်တ၀င့် မညွှန်းတော့ပါ။ အခုညွှန်းသလောက်နဲ့တင် ပို့်စ်က တော်တော်ကိုရှည်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ သွားနေကျဘလော့ဂ်တစ်ချို့ကိုတော့ ညွှန်းလက်စနဲ့ အတိုကောက်ဆက်ညွှန်းလိုက်ပါဦးမယ်။ အဲဒီဘလော့တွေကတော့ -
ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ပတ်သက်လို့ အားထားရတဲ့ - ရှေးမြန်မာ နဲ့ ညလင်းဖြူ
နိုင်ငံခြားခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေ ရေးတတ်တဲ့ - ကိုအေအေတူ
အိမ်မှာဟင်းမကောင်းတိုင်း သွားသွားပြီးသွားရည်ကျဖြစ်တဲ့ - Baby tester နဲ့ Lu Lu
ဆရာမြင့်သန်းရဲ့ စာတွေကို သွားသွားဖတ်ဖြစ်တဲ့ - တေဇာ(လရောင်လမ်း)
ပညာသင်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ရေးတတ်တဲ့ - စန်းထွန်း
မြန်မာစာ စကားပြေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိလွန်းလှတဲ့ - ဆရာဦးမင်းဒင်
၀ထ္ထုတိုလေးတွေ အရေးကောင်းလှတဲ့ - ကိုသတိုး နဲ့ မြသွေးနီ
ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို အားသန်လှတဲ့ - မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ)
မိုးငွေ့ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့မလိုက်အောင် မိုးမိပြီးအအေးပတ်လို့ ဖျားနေတတ်တဲ့ - မိုးငွေ့
ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ရင်ဖွင့်ကောင်းတဲ့ - ကိုစိုစီ(တည်ငြိမ်အေး)ီ
အခုမှပဲ ပြန်ပေါ်လာတဲ့ - အလင်းစက်များ
ထူးဆန်းထွေလာလေးတွေနဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာလေးတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ - သက်တန့်ချို
အလုပ်တွေများနေလို့ စာအရေးကျဲနေတဲ့ အိပ်မက်မှာရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ညီတော် - Deedoe
ခင်စရာကောင်းတဲ့ - ချင်းကလေး KMC
ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ဘလော့ဂ်ရွာထဲမှာ ဦးဟန်ကြည် မဖတ်မိသေးတဲ့၊ အရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေပါသေးတယ်။ မံမံတစ်လုပ်၊ မှန်မှန်အုပ်ရေးအတွက်၊ အလုပ်မပျက်၊ စာသင်လျက်က၊ အနားရမှ စာဖတ်ရသူဖြစ်တာမို့ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေ ပို့စ်အသစ်တင်တာတောင် သွားမဖတ်ဖြစ်တဲ့အခါတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးရဲ့။ ညဘက်ညဘက် ဘလော့လည်ရင်းစာဖတ်နေတာကြောင့် မနက်နဲ့ည အမြဲမှားပြီး လင်းအားကြီး ၃ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှ အိပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခကလည်း သိပ်မသေးလှတာကြောင့် ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ရက်ပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတောင် ဟောသလို စပ်မိပါသေးတယ်။
“ ညစဉ်ညတိုင်း အိပ်ရေးပျက်...အိပ်ရခက်တော့ စိတ်တွေပျက်...မနက်ထဖို့ အကျင့်ပျက်...အလုပ်လုပ်ရင်း မျက်ချေးထွက်...အွန်လိုင်းနှိပ်စက် အနေခက်...ကြာရင်သေဖွယ် ခက်မှခက်... ”
ဒါပေမယ့် ဘလော့ရွာထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီးကျင်လည်နေကြတဲ့ သာတူညီမျှ ရွာသူရွာသားတွေ ဖြစ်ကြတာမို့ အလုပ်များရှာတဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကို နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အခု ဒီဘလော့ဂ်ဒေး တက်ဂ်ပို့စ်မှာလည်း ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများ ရှိရင် ဦးဟန်ကြည် အကောင်းစားလေးကို၊ နှာခေါင်းပြားအောင် ထုမယ်လို့၊ ဒေါသမများဘဲ မနောဟဒယပွားရင်ဖြင့်၊ (ဆုံးသွားတဲ့)တောကအဖွားနဲ့ ပေးစားပါ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း စေတနာအပေါင်းနဲ့ ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ရပါရဲ့ ချစ်စွာသော ဘလော့ဂါအပေါင်းတို့။ ။
Posted by Han Kyi at 6:55:00 am
အမျိုးအစား : Tag post
တက်ပိုစ့်လေးရေးထားတောင် စာဖတ်သူဘလော့ဂါများ ပြုံးရွှင် နှစ်ခြိုက်စရာပါလား ဆရာဟန်ကြည်ရယ် .. မောင်မျိုးနဲ့ တွေ့ တိုင်း ဘောင်ငွေရောင်ဆံပင်လေးနဲ့ဆရာဘယ်လောက်ခန့် ကြောင်း၊ နုကြောင်း ကြားမိပါရဲ့.. ဆရာရေးတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေ အတော့်ကို နှစ်သက်မိသဗျာ .. ဟက်ပီး ဘလော့ဒေးပါနော် .... ပျော်ရွှင်ပါစေလို့.. :)
29 August 2011 at 08:09
ဆရာ့ရဲ့ ကိုးရီးယားအခန်းဆက် ပို့စ်လေးကို စ လည် ဆုံး လာဖတ်သွားပါတယ်... မိုးငွေ့နာမည် မပါမချင်း ဖတ်နေတာ အပိုင်းသုံးကျမှတွေ့သွားတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ ဒီဘလော့ မောင်နှမတွေနဲ့အတူ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်..။
29 August 2011 at 08:53
ဆရာရေ ဆရာ့ရဲ့ရက်ပ်ကဗျာကို Hip Hop ပုံစံမျိုးနဲ့ အော်တော်မိတစ် ပါးစပ်က ဆိုဖြစ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း မသိဘူး။ လေးလုံးတစ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် ၈-လုံးကို တစ်ကြောင်းနှုန်းနဲ့ မရေးထားလို့လား မသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် အနဂ္ဃသီချင်းကိုပဲ နားထဲမှာ စွဲနေလို့လား မသိဘူး။ အနဂ္ဃသီချင်းက ဒီလိုလေ ဆရာရဲ့။...နားထောင်မိရင် သံသယ၀င် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်မမြင် အချစ်တွေနဲ့ အပြစ်တွေနဲ့...ဆိုပြီးတော့လေ။ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်နဲ့ အတူဆိုတာ။ အဲဒီသီချင်းတွေကို ဆရာသိပ်မကြိုက်ဘူး ထင်ပါ့။
ဆရာ့ကို ချီးကျူးသွားပြီ။ တကယ် ချီးကျူးမိသွားပြီ။ လုံးဝကို အရင့်အရင်ထက် လေးစားမိသွားပြီ။ ဆရာ့ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ကိုက်ညီလှချည်လား။ စာအရမ်းဖတ်တာပဲနော်။ ဘုန်းဘုန်းလည်း ဖတ်မယ်ဆိုရင် အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်ထိတော့ မဖတ်နိုင်ဘူး ဆရာရေ့။ ဆရာ့လို ကြိုးစားရဦးမယ် ထင်တယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြကြပါစေ...
အခု ဘလောက်ဒ်ဒေး တဂ်ပိုစ့် ၁ ၂ ၃ ကိုဖတ်ပြီးတော့
ကျွန်တော် တွေးကြည့်မိတာ ဆရာ မရောက်တဲ့ ဘလောက်ဒ် မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။
ဆရာ ရေးသမျှ ပို့စ်တွေ ရှည်တယ်ဆိုပေမယ့်
စာရေး ကောင်းခြင်းရယ် အသိပညာတွေ တိုးပွားခြင်းရယ်
စေတနာ ကောင်းခြင်းတွေရယ်ကြောင့် တင်သမျှပိုစ့်တိုင်းကို
ပြီးအောင်ဖတ်လေ့ရှိပါတယ် စာဖတ်တဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာ တို့လောက် ခရီးမပေါက်လှဘူး ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော် မရောက်းဘူးသေးတဲ့ ဘလောက်ဒ် တွေအမျာကြီးရှိသေးတယ် ဆိုတာ ဆရာ ပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်မှ သိရပါသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းခဲ့ပါရစေ။
29 August 2011 at 10:52
ဘယ်ရမလဲ ပိုက်ဆံချေးမှာ ကြောက်လို့ မျက်နှာကို ခုလို ခပ်တင်းတင်းထားရတာ။
မလန့်ပါနဲ့ ဆရာဟန်.. လမ်းမှာတွေ့ရင် ပိုက်ဆံမချေးဘူးဆိုရင် မချောက သဘောကောင်းပါတယ်။
ရိုက်ထုတ်မဲ့ ဘာဘာညာညာမရှိတော့ ဟင်းကောင်းတိုင်း ဦးဟန်ကြည်နဲ့ မဟေသီကို ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စားပြီးလို့ ပြန်ရင်တော့ ထမင်းဖိုးလေးတော့ မ စခဲ့ပါလို့။
ဒါဆိုရင် နေ့တိုင်းကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ ဟိဟိ။
29 August 2011 at 10:53
အရမ်းလန်းတယ်ဗျို့..ဆ၇ာဟန်ကြည်တို့လုပ်ချလိုက်ရင် ဟာကနဲ ဟင်ကနဲ Rapper တောင်ဖြစ်ချင်သွားမိတယ်..ဂယ်ပဲ..။
29 August 2011 at 11:35
အဲဒါတွေ.....အဲဒါတွေကြောင့် တစ်ခဏချင်း နာမည်ကြိးနေတာပေါ့ အကို :) ပြုံး၍ ရယ်မော၍ ဖတ်ပြိး ပြန်၏ :):)
29 August 2011 at 11:53
ခုနတုန်းက တစ်ခါရေးပြီးပြီ ပျောက်သွားလို့ တစ်ခါပြန်ရေးလိုက်တယ်။ ဆရာက တော်တော်ဖတ်နိုင်တာပဲလား။ ဆရာ့ကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဘုန်းဘုန်းကတော့ ဖတ်မယ်ဆိုရင် အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်ထိ မဖတ်နိုင်ဘူး။
29 August 2011 at 12:18
ခါတော်မီ ပြီးအောင် ရေးနိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်။ ခါတော်မတိုင်ခင် အပြီးရေးရမှာမို့ အိပ်ရေးတွေ မဒမ့်ဆီက ခဏချေးပြီး ရေးလိုက်ရတယ် ထင်ပါ့။ ဟာ ဟ။
ဆရာဟန်ကြည့် ရက်ပ်တေးသားထဲ... ရို့..ရို့..ရို့.. ဆိုပြီး သံစဉ်လေး ကပ်ထည့်လိုက်ရင် ဘာဘူတို့ အနဂ္ဂတို့လောက်တော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်။း))
ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲပြောပြော ဘလော့ဒေးတဂ်ပို့စ် ရေးတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ ဆရာဟန်ကြည်က ပဋ္ဌမဆုဂျီးကို ဋ္ဌိုက်ဋ္ဌိုက် ဋန်ဋန် ဆွတ်ခူး ရရှိသွားပါသတဲ့ ခင်ဗျားးးးးး ။
ဦးဟန်ကြည်ကြီး စာရေးဝါသနာကြီးတာ ယုံပါပြီ...း)...ဟစ်ဟော့သီချင်းတောင် လက်တန်းစပ်လိုက်သေး...
လက်တန်းဟစ်ဟော့လေးကတော့ တကယ်လှတယ် ဆရာ
ဆရာ.....:))) မောင်မျိုးက စီနီယာမို့ မောင်တပ်ခေါ်လို့ရ
တွေးစရာအဖော်ရပြီဆိုတော့ တွေးကြမယ်ဆရာ ရာ...
29 August 2011 at 18:59
အံ့သြလောက်အောင် ဘလော့ဂ်ဒေး တဂ်ပို့စ်တွေကို အခန်းဆက် ရေးသွားနိုင်တာထက် တစ်လုံးမကျန် ဖတ်ချင်အောင် ရေးတတ်တာကို ချီးကျူးပါတယ် ဦးဟန်ကြည်ရေ။ ဘလော့ဂ်ဒေးပို့စ်တွေကို ဆုပေးရင် ပထမဆုကတော့ ပြေးမလွတ်တာ အသေအချာပဲး)။
သုတ ရသပေါင်းစုံပါအောင်လည်း ရေးတတ်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်ကို လေးစားပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ရန်ကုန်လာရင် မဒမ်ပါခေါ်ပြီးလာလည်နော် အန်တီတင့်က အစားအသောက်နဲ့ ဧည့်ခံဖို့အဆင်သင့်ပါး))
ကျေးဇူးပါ ဆရား) ကျနော် ဒီပို့စ်လေး ခဏခဏပြန်ဖတ်ဖြစ်နေတာ ခုမှပဲ မန့်ဖြစ်တော့တယ် ကျနော်လည်း ဆရာတို့ကိုဆုံတော့ ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေပြန်တွေးရသလိုပဲ ခံစားရတယ် ရေစက်ပဲထင်ပါ့ဗျာ ။ ဆရာ့မဟေသီကိုလည်းပြောပြလိုက်ပါအုံး မောင်မျိုးကလည်း အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် အစ်မတစ်ယောက် ကောက်ရလိုက်သလိုပဲ ခံစားရပါတယ်လို့ ။
ဟဟား ကျနော် လက်ဆောင်ခိုးထည့်ပေးလိုက်တာတွေ ၀ယ်တာတွေများပြီး မမှတ်မိပဲ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေမယ်ထင်တာ တကယ်ကြီး သိသွားကြတာပဲ ။
ဆုံသေးတာပေါ့ ဆရာရေ့ ဒီတစ်ခါဆုံရင်တော့ ကွတ်တီယို ကောင်းကောင်း ၀ယ်ကျွေးရမယ် ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပို့စ်လေးကို ဖတ်သွားတယ် ရွှေစင်ဦး ရဲ့ ဆပ်ပြာခဲ စာတွေ ဖတ်ပြီးသားပေမဲ့ အပ်ချီလုံး စာလေး တွေတော့ လာဖတ်နော်
ပျော်စရာ၊ ကြည်နူးစရာလေး တွေပါဗျား။
29 August 2011 at 23:18
အစ်ကိုဟန်ကြည်ရဲ့  ဒီဘလော့ ဒေး ပို့ (စ)
လေးက တော်တော်ပဲ ပြည့် စုံပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်အစ်ကို့ လောက် မလည်နိုင်
မဖတ်နိုင်တာတော့သေချာပါတယ်။
ဘလော့ ကို ချစ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ဆိုတာ
တစ်နေ့ တော့အစ်ကို့ စာရင်းထဲက လူတွေ
နဲ့ အပြင်မှာ စုပြီး လက်ဖက်ရည် သောက်ကြ
30 August 2011 at 05:18
အဖြူလေးပြောသလို အပြင်မှာ ဆုံပြီး လက်ဖက်ရည်သောက်ကြရအောင်
ကိုဟန်ကြည်တစ်ယောက် စာများများရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်
30 August 2011 at 06:48
လုပ်ပြီ ဆရာဟန်ကတော့ . . .
ကျနော့်လောက် လူအပေါင်းအသင်း လက်ဝင်တာ ကျနော်ပဲ ရှိမယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်တာပါပဲ။ မယုံကြည့် အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်ရင် တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ ဆရာဟန့် အကောင့်ကို အက်ထားပါတယ် ဟဲဟဲ။
30 August 2011 at 07:35
ဘာရေးရေး သေသေချာချာ ရေးတဲ့ အကိုဟန်ရဲ့ လက်ရာမူအတိုင်းပါပဲ။ အစအဆုံး ၃ ပုဒ်လုံး ဖတ်ရင်း ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
ဒီလို စာတွေဖတ်ရင်း ဘလော့ဂ်တွေအချင်းချင်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ပိုပြီး တိုးစေတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
အပိုင်း(၄) ဆက်လုပ်ပါအုံး ကိုဟန်ကြည်၊ ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာတွေ အပြည့်ပါတဲ့ အကို့ပို့စ်တွေအတွက်
30 August 2011 at 09:18
အပျော်ဓာတ်လေးတွေကတော့ ထုံးစံမပျက် စီးကူုးလျက်ပါလား ဆရာရေ။။
အခုမှ ရောက်ပြီးဖတ်ဖြစ်တာ ဆော၇ီးပါဗျို့
စုံတွဲလေးတွေကို အားကျရင် မဒမ်ဟန်ကြည်နဲ့ အတူတူရေးလေဗျာ အားပေးနေပါ့မယ်
ဘလော့လေးကို မောင်တစ်ထမ်းမယ်တစ်ရွက် ကြိုးစားပြီး ရေးသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
31 August 2011 at 02:16
ဘလော့ဒေး တက်ဂ်ပို့စ် ၃ ပုဒ်စလုံး ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်။ ဦးဟန်ကြည့်စာတွေ ဖတ်ပြီး သဘောကျတယ်ရှင့်။ အချက်အလက်ကလေးတွေနဲ့ ၊ အထေ့လေးတွေနဲ့ တော်တော် လေးကို ဖတ်ပြီး သဘောကျကျမိသွားတယ်။ သို့ပေမယ့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ခဏခဏ လာမလည်ဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါ၏။
အခုတော့ မီးမီးသိပြီ.. ဆရာဟန်ကြည် တယောက် အဘယ့်ကြောင့် ဘလော့ဂ်ရွာတလွှားမှာ အလွန်တရာနာမည်ကြီးနေရသလဲဆိုတာ.. အသောအထေ့ ပြုံးစေ့စေ့ ဖြစ်စေရန်တကြောင်း၊ ဟန်မဆောင်နိုင်ပဲ ၀ါးလုံးကွဲရယ်မိစေရန်လည်းကောင်း၊ အာဝဇ္ဖန်းကောင်းစွာနဲ့ ရေးသမျှစာကို တစ်လုံးမကျန် ဖတ်ချင်ဖွယ်ရာ ကလောင်သွား ကွန့်မြူးစွာနဲ့ ရေးသားနိုင်သော အစွမ်းရှိမှတော့ နာမည်ကြီးသည်မှာ မဆန်းဟု နားလည်သဘောပေါက်သွားပါကြောင်း...း))
အဲဒီလို စာအရေးကောင်းချင်ပါဘိတော့.. အင်မတန်အားကျမိပါတယ် ဆရာရယ်.. အတုယူဖွယ်ရာ စာရေးသားနည်းများကို မှတ်သားသွားပြီဆရာ..
ဆရာ့အရေးအသားတွေဖတ်ပြီး သဘောကောင်းမယ့်ပုံစံမျိုးပုံဖော်မိပါတယ်။ (ဘာလို့လဲတော့မသိပါဆရာရယ်)
ဆရာပေးထားတဲ့ဘလောဂ့်လင့်လေးတွေလည်း အားတဲ့အချိန်သွားဦးမယ်။ ဆရာစိုးမြင့်(မေ့ဆေး)လင့်လေးတွေ့လို့ ကျေးဇူးဆရာ။
အရင်က ဇီဝကမှာထင်တယ်ဖတ်ဖူးလို့ အမြဲဖတ်ဖြစ်တာ။
ဆရာဟန်နဲ့ ဆရာဟန်မဟေသီရော ပျော်ရွှင်ပါစေ။
စိတ်ဝင်တစား မလေး ဖတ်သွားပါတယ်...။
ကိုယ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း မသိရသေးတဲ့ ဘလောဂ်တွေအကြောင်းလည်း သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
6 September 2011 at 12:05
7 September 2011 at 08:08